आधिकारिक रुपमा युभेन्ट्समा आवद्ध भएपछि रोनाल्डोले दिए भावुक अभिव्यक्ति – Khel Dainik
आधिकारिक रुपमा युभेन्ट्समा आवद्ध भएपछि रोनाल्डोले दिए भावुक अभिव्यक्ति
एजेन्सी । अन्ततः पोर्चुगिज स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो मेडिकल पूरा गर्दै चार बर्षको डीलमा इटालियन च्याम्पियन युभेन्ट्समा आधिकारिक रुपमा आवद्ध भएका छन् ।
बर्नबेयुमा ९ सिजन बिताएका रोनाल्डोले पछिल्लो हप्ता रियल मेड्रिड छोड्ने निर्णय गरेका थिए । युभेन्ट्सले रियलसँग रोनाल्डोका लागि १०५ मिलियन युरोको सहमति बनाएको थियो । युभेन्ट्समा रोनाल्डोको वार्षिक कमाई ३० मिलियन युरो हुनेछ ।
स्मरणीय छ, रोनाल्डोले सन् २००९ मा म्यानचेष्टर युनाइटेडबाट ८० मिलियन पाउण्डमा रियलमा आवद्ध भएका थिए । रियल मेड्रिडको अलटाईम गोलस्कोरर समेत रहेका रोनाल्डोले बर्नबेयुमा रहँदा क्लबका लागि ४३८ खेलमा ४५१ गोल गरेका थिए ।
बर्नबेयुमा रहँदा उनले क्लबका लागि कुल १६ उपाधि जितेका थिए । जसमा दुई ला लिगा उपाधि, दुई कोपा डेल रे उपाधि र चार च्याम्पियन्स लिग उपाधि पनि सामेल छन् । उनले रियल मेड्रिड कै जर्सीमा चारपटक प्रतिष्ठित बेलन डे’अर अवार्ड समेत जितेका थिए ।
रोनाल्डोले आफ्नो अनुबन्धप्रति युभेन्ट्सलाई धन्यवाद दिएका छन् । किनकी आफ्नो उमेरका अधिकांश खेलाडीहरु चीन वा कतार जाने गरे तापनि इटालियन क्लबले आफूमाथि विश्वास गरेकोमा क्लबप्रति आभार समेत प्रकट गरेका छन् ।
He’s here. He’s Bianconero. ⚪⚫ He’s @Cristiano. #CR7JUVE pic.twitter.com/QhvR2X3e26
युभेन्ट्समा आधिकारिक रुपमा आवद्ध भएपछि रोनाल्डोले भने, “करियरको यो समयमा युभेन्ट्समा आवद्ध हुनु एउटा शानदार कुरा हो । म निकै खुशी छु । म जित्न चाहन्छु । म उत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा चिनिन चाहन्छु । के थाहा ? सबै कुरा ठिक भए मैले बेलन डि’अर अवार्ड पनि पाउन सक्छु । म्यानचेष्टर र रियलमा यो जित्नु कठिन रह्यो । यहाँ के हुन्छ, हेर्नेछु ।
म फिजिकली, इमोशनली र मेन्टलीले निकै राम्रो महशुस गरिरहेको छु । युभेन्ट्समा आवद्ध भएर निकै खुशी छु । म ती खेलाडीहरुभन्दा फरक छु, जसले सोच्ने गर्छन्, यो उमेरमा आफ्नो करियर समाप्त भईसकेको छ । मेरो लागि यो निकै भावुक क्षण हो, किनकी म २३ होईन ३३ बर्ष पुगीसकेको छु र क्लबले मलाई यो उमेरमा अवसर दिएको छ । यसले भविष्यका लागि शक्ति प्राप्त हुन्छ ।”
← पाकिस्तानको शानदार जितको यात्रा जारी डच डिफेन्टरलाई बेच्ने म्यानचेष्टर युनाइटेड र एयाक्सबीच बन्यो सहमति →